Ngeshwa, emashumini eminyaka amuva, ukuthandwa kwalokhu yemifino kuye kwehla kakhulu. Eminyakeni eyikhulu edlule eRussia, bakhulisa izikhathi ezingu-35 ngaphezulu kwevodka kunanamuhla. Kodwa lokhu impande akulula nje ukuhlanza, ngenxa yokuthi inikeza isivuno esikhulu. I-rutabaga ingenye yemifino ewusizo kakhulu.
Uma unenhlanhla ngokwanele ukuthola le mifino yemifino ethengiswayo, qiniseka ukuthi ulungiselela okuthile okumnandi. Noma mhlawumbe unqume ukuzikhulisa ngokwakho?
Ososayensi baye basungula ukuthi i-rutabaga ingenye yamasiko amadala kunazo zonke ezaziwa ngabantu. Ngokokuqala ngqa kukhulunywa emithonjeni yaseSweden ephakathi, okuyinto evame ukubizwa ngokuthi isiqalo saseSweden. Kungakhathaliseki ukuthi lokhu kuyiqiniso, cishe akunakwenzeka, kodwa into eyodwa ayinakuphika: eSweden, nakwamanye amazwe amaningi aseYurophu, i-jeans ihlonishwa kakhulu. Wabuye wathola ukusatshalaliswa okukhulu eRussia.
Le mifino ingeyomndeni weKlabishi futhi ihlobene eduze neminye yemifino ewusizo - i-turnips. Ubuso bayo buyingqayizivele, futhi inyama iyabomvu.
Izakhiwo eziwusizo ze-rutabaga
Njengemifino eminingi yalo mndeni, i-rutabaga inamavithamini amaningi. Inani laso lokudla okunomsoco liphansi, kodwa izitsha ezivela kuso zilula futhi ziphansi. I-Rootfruit iqukethe isamba esikhulu sevithamini C, iningi layo futhi i-B 6 ebalulekile.
Le yemifino ingaba yizikhwama zangempela kulabo abanobudlova obunzima. Ukuhoxiswa kwe-cholesterol emzimbeni kungenye yezimfanelo ezisemqoka ukuthi i-rutabaga idume kakhulu.
Izakhiwo eziwusizo akuzona kuphela ezitshalweni zempande, kodwa futhi emaqabunga. Akungabazeki ukuthi uzothanda othile efomini eluhlaza ngenxa yokunambitheka kwakhe okubabayo. Kodwa izinsika eziphekiwe ziba ngethenda futhi zinika umhluzi ukunambitheka okumangalisayo. Kungasetshenziswa, isibonelo, ukulungisa iborski eluhlaza kune-sorrel, isipinashi, i- beetroot.
Kokubili imithi nokudla
Kungani lesi sivuno samasimu sithanda kakhulu abaseYurophu basekuqaleni, ukuthi izitsha ezenziwe nge-rutabaga zithatha indawo enamandla emazweni amaningi abantu? Akuyona nje ukulula nokupheka okuhle. Abantu baye baqaphela kusukela ezikhathini zasendulo ukuthi ukusetshenziselwa le mifino njalo kuvusa ukuzivikela futhi kuqinisa impilo.
Ikakhulukazi ewusizo ekufakweni kwezixhobo zokuphefumula. Ngomkhuhlane owomile, umhluzi wale mifino kanye nembewu yayo kunganciphisa i-sputum, okuzoguqula lesi sifo sibe yisigaba esithinta amandla. Ukubuyiswa kuza ngokushesha.
Okuqukethwe okuphezulu kwe-calcium kwenza le mifino iwusizo kulabo ababhekene nezifo zesimiso se-musculoskeletal. I-rutabaga iqinisa amathambo.
Ijusi elisha elifakiwe lingasetshenziswa ukuphulukisa amanxeba, kuhlanganise ne-purulent, kanye nokuqedwa kokuqala kokushisa. Uma utshalwe, le juice efanayo iyasiza ukunciphisa izinga lokushisa komkhuhlane, ukwelashwa okusheshayo kwemibanda.
I-rutabaga imifino ewusizo hhayi ekhishini kuphela. Ngokusekelwe ku-pulp kanye nejusi yalezi zingcambu, ungalungisa ama-masks ahlukahlukene afaneleka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba, kuhlanganise nalabo abavulekile nabalimala. I-trouser isisiza ukushelela ithoni yesimo, uphulukise amanxeba, ukunciphisa inani lamnyama. Uma upheka noma yikuphi ukudla okuwusizo okuvela kulo mifino, shiya ucezu oluncane lwezinjongo zezimonyo. Kuzodingeka ukuthi igwetshwe, kuhlanganiswe noju kanye nofulawa oat ngo-esilinganisweni esifanayo, bese ufakwa ngokufushane ebusweni. I-decoction yamahlamvu ingasetshenziswa ukugeza izinwele.
Yini okufanele uyilungiselele kusuka ku-rutabaga?
Kodwa indima ebaluleke kakhulu yalezimpande ekuphekeni. Isetshenziswa kanjani i-rutabaga? Ukupheka kwezitsha ezivela kuso kufana nezindlela zokupheka zokupheka ezinye imifino: amazambane, i-turnips, i-kohlrabi.
Isidlo esilula kunazo zonke ihlanzekile. Udinga nje ukubilisa izingcezu zezimpande ezihlutshiwe, udlule emshinini, ugcwalise ngamafutha ukunambitha uphinde uphuze kancane kancane ngobisi obusayo. Ukunambitha i-puree enjengaleyo iyofana namazambane, futhi noma kunjalo kuyoba yiphunga elimnandi kakhulu. Kodwa zama ukuthenga amazambane kumuntu ojwayele i-trousers! Ukunambitheka kwakhe kuzobonakala kungenakuqhathanisa futhi kuyamangalisa.
I-casseroles yemifino enomnandi kakhulu, isobho ne-ragout, ehlanganisa i-rutabaga. Ukulungiselela le mifino kudinga isikhathi esifanayo njengabanye. Ungakwazi ukuqothula ngesibindi izaqathe, ama-eggplants, pepper, amazambane kanye nama-rukukwas ku-kazan, bese ubeka yonke imifino ndawonye. Thola isidlo esiphunga elimnandi sokudla inyama.
I-rutabaga iyimifino enhle kakhulu ekubhaka ku-foil. Gcoba imifino yempande, uwabeke ku-deco bese uyithumela kuhhavini imizuzu engu-40.
Uma uthanda ama-pancake ne-squash, zama ukufaka esikhundleni sesithako esiyinhloko se-trouser. Gubha impande kwi-grater, engeza izinkezo ezimbalwa zefulawa ne-yolk. Bhaka ebhotela, njengama-pancake avamile.
Ungalungisa iphariji eliwusizo, uhlanganise ngokulingana okulinganayo kanye nelayisi. Pheka lezi zithako emanzini, uvumele ukuthi ziguquke ngokuphelele. Thela ubisi obusayo bese ufaka ibhotela. Le phalishi iyoba mnandi kakhulu kokubili ushukela nosawoti.
I-rutabaga isitshalo esineminyaka emibili ubudala. Uma unquma ukutshala le mifino ewusizo ngokwakho, hlola izici zayo kusengaphambili. I-rutabaga ithanda inhlabathi e-alkaline, nakuba ingakhula futhi enhlabathini e-acidic. Kodwa-ke, kulokhu, izithelo ziyoba zibucayi. Ngakho-ke, kunconywa ukuba ulawule ngaphambi kwenhlabathi ngenhlama. Imbewu ihlwanyelwa ngesikhathi sombala kanina nomama.
Le yemifino ayithobeki. Uthanda ukukhanya, kodwa amaqhwa ayamesabi. Ngakho-ke, ngisho noma uhlala esifundeni esenyakatho, ungathembela isivuno esihle, lapho uzopheka khona izitsha eziningi eziwusizo.
Futhi ugcine i-rutabaga, kanye nezinye izitshalo zezimpande, emakamelweni aphephile e-airy.
Bala Dooku, ubunjalo "Izimpi Star"
"Ezidla" ukudla: izinhlanzi Polak
Yikuphi umbhali owabhala izincwadi eziningi? Ubani owabhala iningi amazwi?